Uyiphi Indima I-Immunoglobulin G (Igg) Idlala Kanjani Emzimbeni Womuntu?
Ukubuka konke kwe-Immunoglobulin
I-Immunoglobulin (anti anti), yi-glycoprotein molecule ekhiqizwa amaseli amhlophe egazi. Ama-antibodies ama-immunoglobulins adlala indima ebaluleke kakhulu ekutholeni nasekuzinamathiseleni kuma-antigen athile njengamagciwane namagciwane. Lawa ma-antibodies nawo anomthelela ekubhujisweni kwalawo ma-antigen. Njengoba kunalokho, bakha ingxenye ebalulekile yokuphendula kokuzivikela komzimba.
Kunezinhlobo ezinhlanu ezinkulu ze-Immunoglobulin ezilwaneni ezincelisayo eziphila emanzini, kuye ngo-Amino acid ngokulandelana okuguquguqukayo okukhonjiswe esifundeni esingapheli se-antibody. Kubandakanya i-IgA, IgD, IgE, IgG kanye nama-antibodies e-IgM. Ngayinye yalezi zinhlobo zama-antibody inesakhiwo esihlukile, yingakho umsebenzi ohlukile nokuphendula kuma-antigen.
Ama-antibodies e-IgA ikakhulukazi atholakala ezindaweni ezibucayi kakhulu zomzimba ezivezwa ngezinto zangaphandle zangaphandle. Lezi zindawo zihlanganisa ikhala, indlela yomoya, umgudu wokugaya ukudla, isitho sangasese, izindlebe, kanye nendawo yamehlo. amathe, izinyembezi, negazi futhi kuqukethe amasosha omzimba we-IgA
Ngakolunye uhlangothi, ama-antibodies e-IgG akhona kunoma yiluphi uketshezi lomzimba. Ama-antibodies e-IgM atholakala kuphela ku igazi kanye noketshezi lwe-lymph.
Ama-antibodies e-IgE atholakala ngaphakathi kwamaphaphu, isikhumba, nolwelwesi lwama-mucous. Okokugcina, ama-antibodies e-IgD atholakala esiswini nasesiswini izicubu.
Lapha, sizogxila ku-IgG.
Yini i-Immunoglobulin G (IgG)?
I-Immunoglobulin G (IgG) uyi-monomer; uhlobo olulula kakhulu lwe-antibody ku-serum yomuntu. Ngaphandle kwalokho, ukubalwa kwamaphesenti angama-75 ayo yonke i-immunoglobulin emzimbeni womuntu, luhlobo olwandulela i-immunoglobulin ebantwini.
Amangqamuzana amhlophe egazi akhipha ama-antibodies e-IgG ngendlela yempendulo yokuzivikela komzimba ukulwa nama-antigen. Ngenxa yokuvelela kwayo emzimbeni womuntu kanye nokucaciswa okukhulu kwe-antigen, i-IgG isetshenziswe kakhulu ezifundweni ze-immunological kanye nokuxilongwa kwesayensi. Kusetshenziswa njenge-antibody ejwayelekile kuzo zombili lezi zindawo.
Ngokuvamile, ama-IgG angama-glycoproteins, ngalinye lakhiwe ngamaketanga amane e-polypeptide anamakhophi amabili afanayo azo zonke izinhlobo ezimbili ze-polypeptide chain. Izinhlobo ezimbili ze-polypeptide chain zilula (L) futhi zisindayo, i-gamma (γ). Lezi zinto zombili zixhunyaniswe ngamabhondi angaguquki kanye nemikhosi engenzi lutho.
Umehluko phakathi kwama-molecule we-immunoglobulin G uza ngokuya ngokulandelana kwawo kwe-amino acid. Kodwa-ke, ngaphakathi kuwo wonke ama-molecule we-IgG ngamanye, amaketanga amabili we-L awanandaba, icala linye ngamaketanga we-H.
Indima enkulu ye-molecule ye-IgG ukudala isiyaluyalu phakathi kwezinhlelo zethonya lomzimba womuntu ne-antigen.
Zingaki izinto ezingaphansi kwe-Immunoglobulin G (IgG)?
I-Immunoglobulin G (IgG) iqukethe izinto ezingaphansi ezine ezihlukile ngokuya ngenombolo ye-bond engafinyeleleki kanye nobude besifunda se-hinge nokuvumelana nezimo. Lezi ziqeshana zifaka i-IgG 1, IgG 2, IgG 3 ne-IgG 4.
I-IgG1 kubalwa cishe ama-60 kuye kuma-65% wayo yonke i-IgG eyinhloko. Ngamanye amagama, yi-isotope ejwayelekile kakhulu kunsamu yabantu. Ngokuphawulekile, leli banga le-immunoglobulin licebile kuma-antibodies asiza ukulwa nama-protein ayingozi nama-antijeni e-polypeptide. Isibonelo samaprotheni athinta i-IgG 1 yi-diphtheria, ubuthi be-tetanus bacteria kanye ne-protein viral.
Izingane ezisanda kuzalwa zinezinga elilinganisekayo lokuphendula kwe-IgG1 immune system. Kusesigabeni sokukhulelwa lapho impendulo ifinyelela ekuhlushweni okujwayelekile. Ngaphandle kwalokho, ukwehluleka ukufeza ukugxilwa kuleso sigaba kuwuphawu lokuthi ingane kungenzeka ukuthi ihlushwa i-hypogammaglobulinemia, isifo sokungazweli komzimba esenzeka ngenxa yamazinga angenele azo zonke izinhlobo ze-gamma globulin.
immunoglobulin g subclass 2 iza okwesibili ngokuya ngama-isotopes ajwayelekile kakhulu kwiseyum yabantu. Kubalwa cishe amaphesenti angama-20 kuye kwangama-25 e-Immunoglobulin G. Indima ye-immunoglobulin g subclass 2 ukusiza amasosha omzimba ukulwa nama-antigen e-polysaccharide anti I-Streptococcus inyumoniya or I-Haemophilus influenzae.
Ingane ifinyelela emgomeni ojwayelekile “wabantu abadala” we-immunoglobulin g subclass 2 lapho ineminyaka eyisithupha noma eyisikhombisa ubudala. Ukushoda kwe-IgG2 kubonakaliswa izifo ezivamile zokuphefumula izifo futhi kuvame kakhulu phakathi kwezinsana.
Ngokufanayo, ku-IgG 1, ama-isotopes ama-Immunoglobulin G angaphansi kwe-IgG3 acebile ngama-antibodies. Lawa ma-antibodies asiza impendulo yokuzivikela komzimba ukunqoba amaprotheni nama-polypeptide antigen emzimbeni womuntu.
Ama-5% kuye ku-10% e-IgG ephelele emzimbeni womuntu ayihlobo lwe-IgG3. Kodwa-ke, yize zincane kakhulu uma ziqhathaniswa ne-IgG1, kwesinye isikhathi i-IgG3 inobuhlobo obuphakeme.
Amaphesenti we-IgG 4 we-IgG ephelele ihlala ingaphansi kuka-4%. Kubalulekile futhi ukwazi ukuthi le ngxenye encane ye-Immunoglobulin G itholakala ngamazinga aphansi kakhulu phakathi kwezingane ezingaphansi kweminyaka eyi-10. Ngakho-ke, ukuxilongwa kokulimala kwe-immunoglobulin g subclass 4 kungenzeka kuphela ezinganeni ezineminyaka okungenani eyishumi ubudala kanye nabantu abadala .
Kodwa-ke, ososayensi abengakakwazi ukukhomba umsebenzi oqondile we-immunoglobulin g subclass 4. Ekuqaleni, ososayensi baxhumanisa ukusweleka kwe-IgG4 nokungezwani komzimba kokudla.
Noma kunjalo, ucwaningo olwenziwe muva nje lukhombisa ukuthi iziguli ezine-sclerosing pancreatitis, i-pstantal pneumonia noma i-cholangitis ephezulu yayinezinga le-serum ephezulu ye-IgG4. Ngakho-ke, okutholakele ocwaningweni kushiye udidekile ngendima ngqo ye immunoglobulin g subclass 4.
Ama-Immunoglobulins abelana isikwati esifanayo afane nama-90% afanayo kwi-Homology, angabheki izifunda zawo eziguqukayo. Ngakolunye uhlangothi, lezo ezingaphansi kweziqeshana ezihlukile zabelana ngokulingana okungama-60% kuphela. Kepha ngokuvamile, amazinga okuhlushwa wazo zonke iziqalo ezine ze-IgG zishintsha ngobudala.
Imisebenzi ye-Immunoglobulin G (Igg) kanye Nezinzuzo
Ama-antibodies e-IgG abamba iqhaza elibalulekile empendulweni yokuzivikela yomzimba njengoba i-IgM antibody inakekela impendulo eyinhloko. Ngokukhethekile, i-immunoglobulin g antibody igcina ukutheleleka kanye nobuthi emzimbeni wakho ngokubopha ama-pathogen anjengegciwane, amagciwane kanye nesikhunta.
Yize iyigciwane elincane kunawo wonke, kodwa inala kakhulu emzimbeni wesilwane ezincelisayo, kufaka nokwabantu. ibalelwa ku-80% wawo wonke ama-antibodies akhona emzimbeni womuntu.
Ngenxa yesakhiwo sayo esilula, i-IgG iyakwazi ukungena ku-placenta yomuntu. Eqinisweni, alikho elinye iklasi le-Ig elingakwenza lokhu, ngenxa yezakhiwo zazo eziyinkimbinkimbi. Kanjalo, idlala indima ebaluleke kakhulu ekuvikeleni usana olusanda kuzalwa ezinyangeni zokuqala zokukhulelwa. Lesi ngesinye sezinzuzo ze-immunoglobulin g ezibalulekile.
Ama-molecule we-IgG asabela ngama-Fcγ receptors akhona kuma-macrophage, neutrophil namaseli emvelo amangqamuzana abulala, awanikeze amandla. Ngaphandle kwalokho, ama-molecule anamandla okukhuthaza uhlelo lokuphelelisa.
Uhlelo lokulekelela luyingxenye yamasosha omzimba futhi indima yalo enkulu ukukhulisa umthamo wamaseli we-antibody kanye ne-phagocytic ukukhipha amagciwane kanye namaseli alimele emzimbeni womuntu. Uhlelo luthuthukisa futhi namandla ama-antibodies namaseli okuqothula ulwelwesi lwamaseli lwama-pathogen futhi alwenze lube namandla. Lokhu kungenye yezinzuzo ze-immunoglobulin g.
Umzimba wakho ukhiqiza i-immunoglobulin g antibody ekuphenduleni kokubambezeleka ukunqanda ukutheleleka. Umzimba ungagcina lo antibody isikhathi esengeziwe ukusiza ekulweni namagciwane kuphela anakekela ukutheleleka kepha futhi unikeze amandla wokususa ababhubhisiwe ohlelweni lwakho.
Ngenxa yokukhuthazelela okuphezulu kwe-serum, ama-IgG angama-antibodies asebenza kahle kakhulu ekugonyweni okungapheli. Njengoba kunje, i-IgG ikakhulukazi iyinkomba yokuthi unegciwane noma ukugoma muva nje.
Ukusetshenziswa kwe-IgG Powder nokusetshenziswa
I-IgG powder iyisengezo sokudliwayo esenziwe ngobungcweti esisebenza njengomthombo ocebile we-immunoglobulin G (IgG). Inikeza ukuqoqwa okuphezulu kakhulu kwe-IgG ukusiza umzimba wakho ukuthi ube nokuphendula kokuqina kokuzivikela komzimba, ikakhulukazi uma unezinkinga ezihlobene njalo nezinkinga ezihlobene ne-allergen.
Enye yezithako ezibalulekile ze-IgG Powder yi-bovine colostrum enikeza uhla oluphelele lwama-immunoglobulins wemvelo. La ma-immunoglobulin acacisiwe kuma-antibodies abantu ahlukahlukene, kufaka phakathi i-Immunoglobulin G (IgG). Ngakho-ke, i-immunoglobulin g colostrum iyindlela ephumelelayo yokuqinisa ukungasebenzi komzimba womuntu ukulwa nezifo.
Nge-immunoglobulin g colostrum njengengxenye yayo enkulu, i-IgG Powder inganikeza cishe ama-2,000 mg we-IgG ngokukhonza ngamunye. I-Powder izophinda inikeze umzimba wakho ngamaprotheni (4 g ngokukhonza)
Ikakhulu, i-immunoglobulin g colostrum ku-powder ihlolwe futhi kwafakazwa ukuthi isiza abantu ekugcineni amasosha omzimba anamandla. Ifinyelela lokhu ngokubopha inqwaba yamagciwane kanye nobuthi obutholakala ku-gut lumen.
Ngakho-ke, izinzuzo ze-immunoglobulin g zifaka:
Ukwenza ngcono ukuguquguquka komzimba
Isithiyo se-Stronger gut-immune (GI)
Ukulondolozwa okujwayelekile kokulimala kokuvuvukala
Ukusekelwa kwempilo yokuzalwa okusha
I-Mucosal immune immune ikhuphula amandla, ngenxa yokuhlinzekwa kwe-immunoglobulin okungezona ezokwelapha
Ukulondolozwa kwemali esele
Awukho umthamo oqondile we-IgG powder okufakazelwe ngokwesayensi ukuthi uyilungele. Kodwa-ke, ochwepheshe bezempilo baphakamisa ukuthi i-scoops eyodwa noma eziningana ze-powder ngosuku zilungile. Faka i-powder ye-IgG kumakhilogremu amane amanzi / isiphuzo sakho osithandayo noma njengoba kunconywe udokotela wakho.
I-Immunoglobulin G (Igg) Ukuntuleka
An Ukuntuleka kwe-Immunoglobulin G (IgG) kubhekisa esimweni sempilo esibonakaliswa ukukhiqizwa okungalingani kwe-Immunoglobulin G ngumzimba. Lapho umuntu enesifo se-IgG, usengozini enkulu yokuthola izifo ngoba amasosha omzimba abuthakathaka.
Ngeshwa, ukuntuleka kwe-immunoglobulin g kungakuthinta nganoma yisiphi isikhathi empilweni yakho, akekho iminyaka ekhululiwe kulesi simo.
Akekho okwazile ukukhomba imbangela ngqo yokuntuleka kwe-immunoglobulin g. Noma kunjalo, kusolwa kakhulu ukuthi kuyinto ethize yokwenza izakhi zofuzo. Futhi, ochwepheshe bezokwelapha bakholelwa ukuthi kunemithi ethile nezimo zokwelashwa ezingadala ukuntuleka kwe-IgG.
Ukuxilongwa kokuntuleka kwe-immunoglobulin g kuqala ngokuthatha ukuhlolwa kwegazi ukuhlola amazinga e-immunoglobulin. Ngemuva kwalokho okunye ukuhlolwa okuyinkimbinkimbi okubandakanya ukulinganisa kwamazinga e-antibody ukuhlola impendulo yomzimba ekugomeni okuthile kuyenziwa kumuntu okusolwa ukuthi unaleso simo.
Izimpawu Zokushoda Kwe-Immunoglobulin G
Umuntu onesifo se-immunoglobulin g cishe uzokhombisa lezi zimpawu ezilandelayo:
Izifo zokuphefumula ezifana nokutheleleka nge-sinus
Izifo zesistimu yokugaya
Izifo ezibangela umphimbo obuhlungu
izifo ezinzima futhi ezingabulala (ezimweni ezingavamile)
Kwezinye izimo, ukutheleleka okungenhla kungaphazamisa imisebenzi ejwayelekile yomgwaqo womoya kanye namaphaphu. Ngenxa yalokhu, izisulu zibhekana nobunzima bokuphefumula.
Elinye iphuzu okufanele liqaphele ngalezi zifo ezibangelwa ukuntuleka kwe-IgG ukuthi zingakwazi ukuhlasela ngisho nabantu abagonyelwe umkhuhlane womkhuhlane kanye nomkhuhlane.
Ukwelapha kanjani ukuntuleka kwe-IgG?
Ukwelashwa kokushoda kwe-IgG kunezindlela ezahlukahlukene, ngamunye ngokuya ngobukhulu bezimpawu nokutheleleka. Uma izimpawu zincane, okusho ukuthi zikuvimbela ukuthi uqhubeke nemisebenzi / imisebenzi yakho ejwayelekile, ukwelashwa ngokushesha kunganele.
Kodwa-ke, uma ukutheleleka kunamandla futhi kuvame, ukwelashwa okuqhubekayo kungaba yisixazululo esihle kunazo zonke. Le ndlela yokwelashwa yesikhathi eside ingahle idle ama-antibiotic aphuza nsuku zonke ukulwa nezifo.
Ezimweni ezinzima, ukwelashwa kwe-immunoglobulin kungahle kube usizo.
Ukwelapha kusiza ekuqiniseni amasosha omzimba, ngaleyo ndlela kusiza umzimba ukulwa nezifo kangcono. Kubandakanya ukujova ingxube yama-antibodies (ama-immunoglobulins) noma isixazululo esingaphansi kwesikhumba sesiguli, kuya emgudwini noma ezinhlizweni zakhe.
Ukusetshenziswa kwe-IgG powder kungabona futhi othile ukuthi alulame kusuka ekusweleni kwe-IgG.
Imiphumela ye-Immunoglobulin G Side
Ngemuva kokwelashwa kwe-immunoglobulin, umzimba wakho kungenzeka uphendule kabi kwi-immunoglobulin g.
Imiphumela emibi ejwayelekile ye-immunoglobulin g ifaka:
Ubuhlungu esakhiweni somjovo
Imiphumela engemihle ye-immunoglobulin g imiphumela ifaka phakathi:
Lapho i-immunoglobulin igG iphakeme kakhulu
Phezulu kakhulu I-IgG amazinga angabonakala ku-systemic lupus erythematosus, atrophic portal vein, cirrhosis, hepatitis esebenzayo engapheli, i-rheumatoid arthritis, i-subacute bacteric endocarditis, i-myeloma eminingi, i-non-Hodgkin lymphoma, i-hepatitis, i-cirrhosis, ne-mononucleosis.
Izinga le-IgG le-immunoglobulin lelingene nalo lingabonakala ku-IgG-, ezinye izifo ezingamagciwane (njenge-HIV ne-cytomegalovirus), ukuphazamiseka kweseli le-plasma, isifo se-IgG monoclonal gamma globulin nesifo sesibindi.
Lapho i-immunoglobulin igG iphansi kakhulu
amazinga e-immunoglobulin g aphansi abeka umuntu engcupheni ephezulu yokuthola ukutheleleka okuphindaphindiwe. ama-immunoglobulin g amazinga aphansi angabonakala ngokushoda kwe-antibody, i-immunodeficiency syndrome, i-non-IgG yama-myeloma amaningi, isifo esinamathambo esindayo, isifo se-chain chain noma i-nephrotic syndrome.
Amazinga aphansi ngokweqile we-antibody futhi angaba yizaziso ezinhlotsheni ezithile ze-leukemia, ukulimala kakhulu kokushiswa komzimba, isifo sezinso, i-sepsis, ukungondleki, i-pemphigus, i-music tonic kanye nokungondleki kahle.
Lapho i-immunoglobulin IgG inesimo esihle
Uma i-immunoglobulin IgG iyakhanya kwe-antigen etheleleka njenge-Covid-19 noma i-dengue, kuyinkomba yokuthi umuntu ovivinyiwe kungenzeka ukuthi utheleleke ngegciwane elihambisana nalo emasontweni asanda kwedlula. Futhi, i-immunoglobulin g imiphumela emihle ikhombisa ukuthi kungenzeka ukuthi umuntu athole umuthi wokugoma kamuva nje ukuze abavikeleke kuleligciwane.
Ngakho-ke, umphumela omuhle we-immunoglobulin g uwuphawu lwengozi eyengeziwe yomuntu yokutheleleka okuhlobene ne-antigen okunomthelela ekuhlolweni okuhle. Lokhu ikakhulukazi uma umphumela omuhle ungekho ngenxa yomgomo wokugoma.
Kungani Is I-Immunoglobulin G (Igg) Kubaluleke Kanjani Emisebenzini Yempilo?
I-Immunoglobulin G (IgG) ibaluleke kakhulu emisebenzini yempilo ngoba idlala indima ebaluleke kakhulu ekugcineni abantu bephilile futhi bekwazi ukuqhubeka nemisebenzi yabo yokuphila uma kuqhathaniswa namanye ama-Immunoglobulins.
Kuyaphawuleka ukuthi ama-antibodies e-IgG akhona kuwo wonke uketshezi lomzimba, zisho izinyembezi, umchamo, igazi, ukuphuma komlomo wesibeletho nokunye. Uma ucabanga ngalokhu, akumangazi ukuthi zingama-antibodies ajwayelekile kakhulu, angama-75% ukuya kuma-80% alo lonke inani lama-antibodies emzimbeni womuntu.
Ama-antibodies avikela izitho zomzimba / izitho zomzimba ezixhumene nalawa manzi kusukela ekuthelelekeni ngegciwane nasegciwane. Ngakho-ke, ngaphandle noma ngamazinga anganele we-IgG, ungahle ungakwazi ukubakhona ukuze uhambele ngokwenele emisebenzini yakho yansuku zonke yempilo ngenxa yokutheleleka okuvela njalo.
Ngaphezu kwalokho, i-IgG ibalulekile ekuzaleni kabusha komuntu. Ukuba mncane kunawo wonke ama-antibodies futhi unesakhiwo esilula kakhulu, kungukuphela kwe-antibody ekwazi ukungena kwi-placenta kowesifazane okhulelwe. Ngakho-ke, ukuphela kwento engavikela ingane engakazalwa ezifweni ezibangelwa amagciwane kanye namagciwane. Ngaphandle kwayo, izingane eziningi ezingakazalwa zizoba sengozini enkulu yokuba nezimo zezempilo ezahlukahlukene, ezinye zazo ezingaba yingozi empilweni noma empilweni yonke.
Is Kukhona Ukusebenzisana Phakathi kwe-Immunoglobulin G Futhi uLactoferrin?
Zombili i-immunoglobulin G ne-lactoferrin zombili ziyizici ezibalulekile zemvelo zobisi lwe-bovine (kubantu nasezinkomeni). Njenge-immunoglobulin G, ucwaningo lukhombisa ukuthi i-lactoferrin nayo ibandakanyeka emisebenzini ehlukahlukene yokuvikela emzimbeni womuntu.
Kuyasiza umzimba ukuthi ulwe namagciwane we-pathogenic afana namagciwane, amagciwane kanye nezifo zokukhunta. Ngamanye amagama, kuqinisa ukusebenza komzimba womuntu. Ngakho-ke, ama-suppact lactoferrin angalinganisa i-immunoglobulin G powder kulo msebenzi.
Noma kunjalo, i-lactoferrin inomsebenzi owengeziwe; ukubopha insimbi nokuhamba.
Okuningi Imininingwane Ngama-Immunoglobulins
Nini ukuvivinya ama-immunoglobulins?
Ngesinye isikhathi, udokotela wakho angakucebisa ukuthi uhlolwe i-immunoglobulin, ikakhulukazi yena osola ukuthi unamazinga we-immunoglobulin aphansi kakhulu noma aphezulu kakhulu. Ukuhlolwa kuhloselwe ukuthola inani (inani) le-immunoglobulin emzimbeni wakho.
Kakhulu, a ukuhlolwa kwe-immunoglobulin Kunconywa uma une:
Izifo ezenzeka njalo, ikakhulukazi i-sinus, amaphaphu, isisu, noma amathumbu
Isifo sohudo esiqhubekayo / sohudo
Ukwehla kwesisindo okumangazayo
ukusabela okukhulu komzimba
I-HIV / AIDs
Umlando wokugonywa komndeni
Udokotela wakho futhi angakuthola kuwukuhlakanipha ukuncoma ukuhlolwa kwe-immunoglobulin uma uyagula ngemuva kokuhamba.
Ukuhlolwa kwegazi kwe-immunoglobulins kusetshenziselwa ukusiza ekutholakaleni kwezimo ezahlukahlukene zezempilo ezifana:
Ukutheleleka ngegciwane kanye namagciwane
Ukungondleki: Lesi yisimo esibonakaliswa umthamo omncane womzimba womuntu wokulwa nezifo nokutheleleka
ukuphazamiseka kwe-autoimmune njenge-rheumatoid arthritis ne-lupus
izinhlobo zomdlavuza njenge-myeloma eminingi
Izifo ezisanda kuzalwa zomntwana
Kwenziwa kanjani ukuhlolwa?
Lokhu kuhlola kuvame ukufaka ukukala izinhlobo ezintathu ezivame kakhulu ze-immunoglobulin; I-IgA, IgG, ne-IgM. Lezi ezintathu zikalwa ndawonye ukunikeza udokotela wakho isithombe sokusebenza kahle kokuphendula kokuzivikela komzimba.
Isampula lakho legazi lizoba yisibonelo salolu vivinyo. Ngakho-ke, uchwepheshe welebhu uzongena phakathi kwenalithi engxenyeni yengalo yakho ukuze afinyelele komunye wemithambo engaphansi. Ngemuva kwalokho, uchwepheshe uvumela igazi ukuthi liqoqe ku-tube noma i-vial enamathiselwe ngenaliti.
Ngenye indlela, udokotela angaqoka ukusebenzisa isampula ye-cerebrospinal fluid (CSF) yakho esikhundleni segazi ukuze ahlolwe. Ukucaciselwa, uketshezi lweCrocbrospinal uketshezi oluzungeze intambo yomgogodla nobuchopho bomuntu. Uchwepheshe wakho uzosebenzisa inqubo ebizwa nge-lumbar puncture ukukhipha uketshezi lomgogodla wakho.
Ukukhishwa kwesampula le-fluid kungaba buhlungu impela. Kodwa-ke, ochwepheshe ababandakanyeka kulezi zinqubo zasekhaya zokubulala izinzwa ukwenza indawo ethintekile yomzimba ingazweli ebuhlungwini. Ngakho-ke, into yokuqala uchwepheshe wakho welebhu azoyenza ukushaya umuthi wokudubula obulala izinzwa emhlane wakho ukuze ubeke bonke ubuhlungu.
Ngemuva kwalokho, uchwepheshe welebhu uzokucela ukuba ulale ohlangothini lwakho etafuleni bese uphakamisa amadolo wakho ekuhlolweni kwakho. Ngenye indlela, ungacelwa ukuthi uhlale etafuleni. Uma ukulezi zikhundla ezimbili, uchwepheshe uzokwazi ukuthola ama-vertebrae akho womabili aphansi.
Okulandelayo ukuthi uchwepheshe afake inalithi eyize phakathi ne-vertebrae yesithathu neyesine. Ngemuva kwalokho, inani elincane lamanzi akho we-cerebrospinal lizoqoqana ngenalithi eyize. Ngemuva kwemizuzwana embalwa, uchwepheshe uzodonsa inaliti kanye noketshezi oluqoqwe ngaphakathi kwalo.
Ekugcineni, isampula ye-fluid izofakwa kwikhithi yokutholwa ye-immunoglobulin-ethize ukuze ihlolwe.
I-Immunoglobulin G (IgG) iphakathi kwamanye ama-immunoglobulin abalulekile emzimbeni womuntu. Abanye yi-IgA, IgD, IgE, kanye ne-IgM. Kodwa-ke, ezinhlotsheni ezine zama-immunoglobulins, i-IgG yincane kunazo zonke kodwa ebaluleke kakhulu futhi ibalulekile emzimbeni. Kukhona kunoma yiluphi uketshezi lomzimba ukusekela amasosha omzimba empini yawo yokulwa namagciwane (amagciwane namagciwane).
Izinga eliphansi kakhulu noma eliphakeme le-immunoglobulin G ilungele impilo yakho. Uma kwenzeka untula i-immunoglobulin g, a Thenga i-IgG powder futhi ukusetshenziswa kungaba yisinyathelo sokululama kwakho.
ISaadoun, S., Amanzi, P., Bell, BA, Vincent, A., Verkman, AS, & Papadopoulos, MC (2010). Ukulimala kwe-intra-cerebral ye-neuromyelitis Optica immunoglobulin G kanye nokupheleliswa komuntu kukhiqiza izilonda ze-neuromyelitis optica kumagundane. Brain, 133(2), i-349-361.
UMarignier, R., Nicolle, A., Watrin, C., Touret, M., Cavagna, S., Varrin-Doyer, M.,… & Giraudon, P. (2010). Ama-Oligodendrocyte onakaliswa yi-neuromyelitis Optica immunoglobulin G ngokulimala kwe-astrocyte. Brain, 133(9), i-2578-2591.
Berger, M., Murphy, E., Riley, P., & Bergman, GE (2010). Izinga lempilo elithuthukisiwe, amazinga we-immunoglobulin G, kanye namazinga wokutheleleka ezigulini ezinezifo eziyisisekelo zokugonywa ngesikhathi sokuzilapha nge-subcutaneous immunoglobulin G. Ijenali yezokwelapha eseNingizimu, 103(9), i-856-863.
URadosevich, M., & Burnouf, T. (2010). I-Intravenous immunoglobulin G: izitayela zezindlela zokukhiqiza, ukulawulwa kwekhwalithi kanye nokuqinisekiswa kwekhwalithi. Vox sanguinis, 98(1), i-12-28.
Fehlings, MG, & Nguyen, DH (2010). I-Immunoglobulin G: Ukwelashwa okungenzeka kokuthola i-neuroinfranceation kulandela ukulimala komgogodla. Ijenali ye-immunology yomtholampilo, 30(1), i-109-112.
UBereli, N., Şener, G., Altıntaş, EB, Yavuz, H., noDenizli, A. (2010). Ubuhlalu be-Poly (glycidyl methacrylate) buhlotshiswe ama-cryogels wokuncipha kwe-pseudo eqondene ne-albhamuin ne-immunoglobulin G. Isayensi Yezinto Nobunjiniyela: C, 30(2), i-323-329.